Dhaxalsugaha Koowaad ee Aala-Sucuud Muxamed bin Salmaan Oo sheegay in Yahuudu xaq ku leeyihiin ku noolaanshaha dhulka Filastiin. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Dhaxalsugaha Koowaad ee Aala-Sucuud Muxamed bin Salmaan Oo sheegay in Yahuudu xaq ku leeyihiin ku noolaanshaha dhulka Filastiin.
On Apr 3, 2018 272 0
Muxamed bin Salmaan, dhaxalsugaha koowaad ee maamulka Aala-Sucuud, ahna wasiirka gaashandhiga ee maamulkaas ayaa marba marka ka dambeysa jeedinaya hadalo la yaab leh oo ay horey uga cabsan jireen iney ku dhiiradaan dhawaaqiidda carabta iyo caalamka Islaamka.
Waraysi uu Bin Salmaan siiyay wargeyska The Atlantic ayuu ku sheegay Muxamed bin Salmaan dhaxalsugaha koowaad ee maamulka Aala-Sucuud in Yahuudu ay xaq u leeyihiin iney ku noolaadaan dhulka uu ku sheegay iney lahaayeen Awoowyaashooda oo uula jeedo dhulka Filastiin.
Mar la waydiyay su’aal ahayd in shacabka Yahuudda ay xaq u leeyihiin iney ku noolaadaan dhulka Filastiin ayuu ku jawaabay “ waxaan aaminsanahay in shacab kasta uu xaq u leeyahay inuu ku noolaado dhulkiisa isagoo amaan dareemaya, Filastiiniyiinta iyo Israa’iil waxay xaq u leeyihiin iney ku noolaadaan dhulkooda gaarka ah”.
Muxamed bin Salmaan wuxuu si aan ka gambasho lahayn u sheegay in maamulkiisa iyo kan Yahuudda ay ka dhexeyso masaalix iyo dano waaweyn, waana mas’uulkii ugu horeeyay oo Aala-Sucuud katirsan oo hadal sidan u cad oo ku saabsan Yahuuda sheega.
Tan iyo markii uu aabihii qabtay xilka madaxtinimada maamulka Aala-Sucuud, wuxuu bin Salmaan qaadayay tallaabooyin la yaab leh, isagoona xabsiyada u taxaabay kumanaan ruux oo ay ku jiraan ducaad, culimo, wariyaal iyo ganacsato, iyo xitaa xubno katirsan qoyska talada haya ee Aala-Sucuud, waxaana sanadkii hore saraakiil katirsan maamulka Yahuudda ay sheegeen in Bin Salmaan uu booqasho qarsoodi ah ku yimid magaalada Talla’biib oo kamid ah dhulka ay Yahuuda xooga ku heystaan.